Waddamada Carabta oo ballan qaaday Caawinta Soomaaliya – Radio Muqdisho
Waddamada Carabta oo ballan qaaday Caawinta Soomaaliya
Shirkii Baarlamaannada Waddamada carabta ee shalay lagu soo gaba-gabeeyay ayaa diiradda lagu saaray wax ka qabashada xaaladaha Argagixisanimo ee ka jira Waddamada Carabta.
War-murtiyeed laga soo saaray Shirkaasi Gaba-gabadiisa ayaa lagu sheegay in waddamo Soomaaliya ay ka mid tahay laga caawin doono ka hortagga kooxaha Argagixisada ah ee Al-Shabaab.
Guddoomiye kuxigeenka Guddiga Arrimaha Dibadda Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cumar Dalxa ayaa tilmaamay in Xubnihii shirkaasi u joogay Waddamada carabta ay ballan qaadeen in Soomaaliya ay ka caawin doonaan Arrimaha amniga iyo Dhismaha Ciidamada Qalabka sida si ay u wiiqaan Awoodda yar ee Argagixisada Ex Alshabaab UGUS.
Dhanka kale Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa sheegay in shirkaas lagu Cambaareeyay weerarradii Argagixisanimo ee ka dhacay Magaalooyinka Muqdisho iyo Beydhabo.
Shirkan waxaa ka horreeyay shirka Guddoomiyaasha Baarlamaannada Waddamada Carabta kaas oo isna leysla Soo qaaday sidii looga wada shaqeyn lahaa amniga Waddamada Carabta.
Golaha wasiirrada oo isku raacay In Talisyada Nabad Sugidda iyo Booliska ay hoostagaan Gobolka Banaadir
Wasiir Maareeye “Barakacayaasha dib u dajin ayaa loo sameynaa”
Wasiir Maareeye "Barakacayaasha dib u dajin ayaa loo sameynaa"